Lenovo dia misolo tena 0,4% fotsiny amin'ny tsena any Shina | Androidsis
Eder Ferreno | | Lenovo, About us
Lenovo dia marika fantatry ny ankamaroan'ny mpampiasa, na dia tsy dia mahomby amin'ny tsenan'ny telefaona aza izy ireo. Hatramin'ny efa nihena kelikely ny varotra mpanamboatra. Zavatra iray hita taratra amin'ny varotra any Chine koa. Any amin'ny firenena nahaterahany dia nahatratra 0,4% ny tsena ankehitriny. Ny varotra izay mitohy mihena haingana.
Tamin'ny 2015 i Lenovo dia afaka nivarotra telefaona 22,1 tapitrisa. Tarehimarika tsara izay nanasongadina ny fangatahana lehibe eny an-tsena ho an'ireo finday mpanamboatra. Saingy niova tanteraka ny toe-draharaha tao anatin'ny telo taona monja.
Hatramin'ny findainy 1,79 tapitrisa ankehitriny ny varotraFarafaharatsiny ireo no tarehimarika ho an'ny 2017. Fidinan'ny mpivarotra ny fivarotana iray, izay tsy isalasalana fa mampiahiahy. Satria very tany izy noho ny hafainganam-pandehan'ilay firenena nahaterahany.
Tamin'ny taona 2009 izy ireo no marika telefaona be mpividy indrindra tany Sina, ary nandeha tsara ny zava-drehetra ho an'i Lenovo. Saingy ny toe-java-misy eo amin'ny fizarana telefaona misy azy dia tsy mandeha amin'ny ora toa ny taloha. Satria very ny ampahany amin'ny tsenany any Shina.
Misolo tena ny 0,4% amin'ny tsena sinoa fotsiny izy ireo ankehitriny, fidinana lehibe. Ny iray amin'ireo antony nahatonga azy ireo hihena dia ny fisian'ny famoahana azy ireo somary misafotofoto ho an'ireo mpampiasa. Satria namoaka andalana maromaro izy ireo, saingy toa tsy misy fiaraha-miasa firy amin'ny famoahana azy ireo. Mbola kely kokoa izao dia nanambara izy ireo fa hiverina amin'ny tsena ny ZUK.
Ny toe-javatra misy an'i Lenovo dia tsy ny tsara indrindra, izay nanjary mazava. Noho izany dia ilaina ny mijery raha mahavita mandresy an'io toe-javatra io mandritra ny taona 2018 ny marika. miaraka amin'ireo findainy vaovao. Na dia ny fandrosoan'ny marika vaovao toa an'i Xiaomi sy Huawei aza dia naka tsena marobe avy amin'ny orinasa. Hiverina amin'ny fisintahana amin'ny tsenan'ny smartphone ve izy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny fivarotan'i Lenovo dia mitohy mihena be any Shina
Ny rafitra famantarana ny tarehy dia tonga amin'ny Mate 9 sy Mate 9 Pro